MIUI Rom သုံးပြီး Google Service, Google Application သုံးမရသူများအတွက် « XMS-MMF
MIUI Rom သုံးပြီး Google Service, Google Application သုံးမရသူများအတွက်
By Zeyar Lin on Monday, December 29, 2014 at 1:46am
Miui Rom (Mi Phone မှ မဟုတ်ပါ တခြားတခြားသော Mi Rom သုံး Phone များအတွက်ပါ) သုံးနေကြပြီး Google Account, Google Application, (Gapp) တွေသုံးမရ သွင်းမရလို့ စိတ်ညစ်နေကြပါသလား..... စိတ်မညစ်နေပါနဲ့တော့လို့ ပြောပါရစေ .... :-P :-)
Android Version 2.3.X >>http://www.mediafire.com/download/asr01ws3g6wx8py/GB-GAPPS.zip
Android Version 4.0.X >>http://www.mediafire.com/download/a4j8cu5xxduq3y3/ICS-GAPPS.zip
Android Version 4.1.X >> http://www.mediafire.com/download/o77cv1cncqn0x79/4.1.X-GAPPS.zip
Android Version 4.2.X >> http://www.mediafire.com/download/jmo0z8grsjo2di7/4.2.X-GAPPS.zip
Android Version 4.3.X >> http://www.mediafire.com/download/l3fisovl5rrllxl/4.3.X-GAPPS.zip
Android Version 4.4.X >> http://www.mediafire.com/download/flchx8abs199679/4.4.X-GAPPS.zip
Mi4i >> https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ2tGXZ3MMRmAoioDVARWj7kw4bGSu2LHgk
MIUI Rom တွေမှာ Google Service အတွက်
Gapp လို့ခေါ်ကြတဲ့ google service အတွက်လိုအပ်တဲ့ အဓိက ဖိုင်၎ ဖိုင်ပါ1. Google Account Manager.apk2. Google Contacts Sync.apk3. Google Services Framework.apk4. Google Play services.apkအဲ့ဒီဖိုင်တွေရှိဖို့လိုတယ် ဒါတွေကတော့ Miui rom တွေမှာလိုတာလို့ပြောချင်တာပါ တခြားဟာတွေတော့မစမ်းဖူးတော့မပြောတတ်ဘူးဗျအဲ့ ၄ဖိုင်ထည့်ပြီး သုံးချင်တဲ့ apk တွေထည့်သုံးရင်ရပါပြီ ဥပမာ Google Play, Google Mail, Google Map.
For Andrioid Version 4.4.x
အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ကြပါစေ ခင်ဗျာ
MMAS နဲ့ MMUG အတွက် အမြဲပေးဆပ်နေမယ့် ကိုကိုကြပ်
မှတ်ချက်။ zip လိုက် flashရင် တချို့ versionတွေမှာ otaတင်မရတတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒါကိုဖြည်ပြီး private appထဲကဟာတွေ တခုခြင်း အကုန်ထည့်ပါ။ 3:51:00 AM